Tantara: Tsy Nivadika Tamin’Andriamanitra i Joba - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Voalohany, dia nataon’i Satana izay hangalaran’olona ny omby sy ny ramevan’i Joba, ary novonoiny ny ondry aman’osiny. Avy eo dia novonoiny tao amin’ny taﬁodrivotra ny zanany folo mianadahy. Manaraka izany, dia namely an’i Joba tamin’io aretina mahatsiravina io i Satana. Faran’izay nijaly i Joba. Izany no antony nilazan’ny vadiny taminy hoe: ‘Mitenena ratsy an’Andriamanitra ianao, dia aoka ho faty.’ Nefa tsy nety nanao izany i Joba. Nisy sakaiza sandoka telo tonga koa ary nilaza taminy fa nanana ﬁainana ratsy izy. Nitoetra ho mahatoky anefa i Joba.
Inona no ﬁtahiana ho azontsika, raha tsy mivadika toa an’i Joba isika?
Inona no mampitovy ny valisoa azon’i Joba sy Jesosy, noho ny tsy ﬁvadihany? (Joba 42:12; Fil. 2:9-11)